बिल गेट्स कसरी धनी भए ? कति छ उनको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । विलियम हेनरी ‘बिल’ गेट्स तृतिय,एक अमेरिकी बिजनेश म्यानको जन्म सन् १९५५, अक्टोबर २८ मा भएको थियो । उनी एक बिजनेश म्यागनेट, इन्भेष्टर, लेखक र समाजसेवी हुन् ।
हावर्डमा पढ्दा उनले अलटायर मिनी कम्प्युटरबारे एउटा आर्टिकल पढेका थिए । उक्त आर्टिकल पढेपछि उनले पढाइ छोडेका थिए । त्यसपछि २० वर्षको उमेरमा सन् १९७५ मा उनी र पाउल एलेन मिलेर माइक्रोसफ्टको स्थापना गरे जुन विश्वभरकै पिसी सफ्टवेयर कम्पनी बन्न सफल रह्यो ।
सन् १९८७ मा नै उनी फोब्र्स म्यागजिनले जारी गर्ने विश्वकै धनी व्यक्तिहरुको सुचीमा परेका थिए ।
सन् १९९५ देखि २००७ सम्म उनी विश्वकै धनी व्यक्तिको पहिलो स्थानमा रहन सफल रहे । सन् २००९ मा उनी पुन धनी व्यक्तिको पहिलो सुचीमा परे । सन् २००९ देखि २०१४ सम्ममा उनको सम्पत्ति दुई गुणा भन्दा बढी भइसकेको थियो ।
४० बिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर उनको सम्पत्ति ८२ मिलियन डलर भएको थियो । सन् २०१७ को सुची हेर्ने हो भने पनि उनी विश्वकै धनी व्यक्तिको सुचीको पहिलो स्थानमा रहेका छन् । उनको सम्पत्ति ८५.६ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
जब उनी ३१ वर्षको थिए उनको नेटवर्थ १ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
माइक्रोसफ्ट रेभेन्यु–८५.३ बिलियन अमेरिकी डलर
घर र अन्य सम्पत्तिहरु
जनडु २.०, वासिङटन–१५४.२ मिलियन अमेरिकी डलर
रान्छो पासियाना, सान डियगो–१८ मिलियन डलर
विलिङटन फ्लोरिडा–१३.५ मिलियन डलर
ग्राण्ड बोग काय, बेलिज–२५ मिलियन डलर
१९८८ पोस्र्च ९५९ कप–३,८०,००० अमेरिकी डलर
पोस्र्च ९११ कारिया–१,४९,७२० अमेरिकी डलर
बमबार्डियर बिडी–७०० – ४० मिलियन डलर
बोइङ बिजनेश–८० मिलियन डलर
आर्ट एण्ड कलेक्शनहरु
कोडेक्स लेसिस्टर, बुक अफ लियोनार्दो दा भिन्ची– ३०.८ मिलियन डलर
लस्ट अन द ग्राण्ड ब्यांक्स–३६ मिलियन डलर
पोलो क्राउड (१९१०)–२८ मिलियन डलर
उनले गरिबी निवारण, स्वास्थ्यमा सुधार गर्नका लागि उनले २८ बिलियन डलर दान गर्दै आइरहेका छन् ।